Waayaha | Somali News and Information Website | Page 3
MUQDISHU, Somalia- Cabdiraxmaan Farole oo kamid ah Xildhibaanada Aqalka Sare Somalia islamarkaana kamid ahaa raggii xilka Madaxweynaha Somalia isu-taagay kahor intuusan tanaasulin maalin ka hor ayaa ka hadlay doorashadii ka dhacday xarunta Afesiyoone ee magaalada Muqdishu. Farole, ayaa hambalyo u…
MUQDISHU, Somalia- Waxaa Madaxweynaha Somalia noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kadib markii Xasan Sheekh oo wareegga ugu dambeeya kula tartami lahaa uu ka haray doorashada islamarkaana ugu hambalyeeyay xilka uu ku guulaystay. Farmaayo ayaa wareegii Labaad ee tartanka helay codad gaaraya…
Doorasho la isku mari waayay ayaa maanta ka dhacday magaalada Kismaayo, kaasoo Kursigii Beesha Gaaljecel ee horay loo laalay, lana go’aamiyay in doorashadiisa dib loogu celiyo. Kursigan oo ay ku tartamayeen Wasiirkii Batroolka Maxamed Mukhtaar iyo C/llaahi Maxamed Aadan Shaacir…
Kulan uu shir guddoominayay Madaxweyne Gaas ayaa maanta ka dhacay magaalada Garowe caasumadda Puntland, kaasoo ahaa shir khamiiseedka golaha wasiirrada. Waxaa looga hadlay arrimo ay kamid ahaayeen ammaanka Bosaso iyo abaaraha baahsan ee dalka ka jira. Kulankaas ayaa lagu falanqeeyay…
Madaxweynaha waqtigiisu dhamamaday ee dalka Somalia, Xasan Sheekh Maxamud ayaa caawa ka hadlay go’aan kasoo baxay maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ kaasoo ay ku ogolaatay inay qaado dacwadda kiiska muranka biyaha ku saabsan ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Somalia.…
Maxkamada Caalamiga ee Cadaallada QM (ICJ) ayaa go’aan ka gaartay Dacwadda la xiriirta Muran dhanka Badda ee u dhaxeeya dalalka Somalia iyo Kenya. ICJ oo la jirsatay Somalia, waxay diiday doodii Kenya ee ahayd in heshiiska u dhaxeeya labada waddan…
Qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka Madaxweynaha Soomaaliya ayaa qudbado u jeediyay xubnaha labada gole iyadoo qudbadahaasna ay ahaayeen kuwo isugu jiray ammaan,eedeyn,codsi iyo waxqabadka musharaxiinta maanta qudbadaha jeediyay. Iyadoo la qorsheynayay in 8 musharax ay qudbadahooda jeediyaan…
Hogaamiyihii Xisbiga Mucaaradka dalka Congo, Etienne Tshisekedi ayaa geeriyooday isagoo arrimo caafimaad ugu maqan dalka Belgium gaar ahaan magaalada Brussels. Sida ay shaaciyeen Xisbiga UDSP, Etienne ayaa muddooyinkii dambe sheeganayay xunuuno kala duwan. Ninkan oo da’diisu ahayd 85 sano ayaa…
Doorashooyin ka dhacay magaalada Muqdishu iyo qaar kamid ah xarumaha maamul goboleedyada Somalia ayaa waxaa kusoo baxay shakhsiyaad kamid ahaa 11 qof ee la diiday doorashadooda kadib markii lagu helay arrimo isugu jira laaluush iyo musuq-maasuq. Mid kamid ah kuraastaas…
Ra’iisul Wasaare Ku-Xigeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carteh ayaa shir-gudoomiyay kulan looga arrinsanayay amniga doorashada Madaxweynaha oo ay ka soo qaybgaleen Wasiirada Cadaaladda iyo Amniga, Ku-Xigeenka Ergeyga gaarga ah ee Midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya, iyo taliyayaasha ciidamada…